जब येशू फेरि आउनुहुनेछ - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2021-04 > येशू फेरि कहिले आउनुहुन्छ?
के तपाइँ चाहनुहुन्छ कि येशू चाँडै फर्कनु हुन्छ? दु: ख र दुष्टता को अन्त्य को लागी आशा छ कि हामी हाम्रो वरिपरि देख्छौं र भगवान एक समय मा शुरू हुनेछ जस्तै यशैया भविष्यवाणी गरे: «मेरो सबै पवित्र पहाड मा कुनै दुष्टता वा हानि हुनेछैन; किनकि भूमि प्रभुको ज्ञानले भरिएको छ किनकि पानीले समुद्रलाई ढाक्छ? " (यशैया ११:))।
नयाँ नियमका लेखकहरु येशू को दोस्रो आगमन को प्रत्याशा मा बाँचिरहेका थिए ताकि उनीहरु लाई वर्तमान दुष्ट समय बाट छुटकारा दिनेछन्: «येशू ख्रीष्ट, जसले हाम्रा पापहरु को लागी आफैंलाई बलिदान दिनुभयो, कि उहाँले हामीलाई यस वर्तमान दुष्ट संसार बाट बचाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा, हाम्रा बुबा Gala (गलाती १: ४)। उनीहरुले ईसाईहरुलाई आध्यात्मिक रुपमा तयार रहन र नैतिक रुपमा सतर्क रहन आग्रह गरे, यो जान्दा कि प्रभुको दिन अप्रत्याशित र चेतावनी बिना आउँछ: "तपाइँ आफैंलाई राम्ररी थाहा छ कि प्रभुको दिन राती चोर जस्तै आउँछ" (जनरल थेस्स ५.२)।
येशूको जीवनकालमा, आज जस्तै, मानिसहरु अन्त कहिले आउनेछन् भनेर हेर्न को लागी उत्साहित थिए ताकि उनीहरु यसको लागी तयारी गर्न सक्थे: "हामीलाई भन्नुहोस् यो कहिले हुनेछ? र तपाइँको आगमन र संसार को अन्त को लागी के चिन्ह हुनेछ? " (मत्ती २४: ३)। विश्वासीहरु लाई तब देखि एउटै प्रश्न थियो, हामी कसरी जान्न सक्छौं कि हाम्रा मालिक कहिले फर्कने हो? के येशूले भन्नुभयो कि हामी समय को संकेत को लागी हेर्नु पर्छ? येशूले बताउनुभयो कि इतिहास को समय को बावजूद तयार र सतर्क रहन को लागी अर्को आवश्यकता छ।
येशूले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ?
येशूका चेलाहरुको प्रश्नको जवाफले सर्वनाशका चार घोडसवारहरुको चित्र देखाउँछ (प्रकाश 6,1: १- see हेर्नुहोस्) जसले शताब्दीयौंदेखि भविष्यसूचक लेखकहरुको कल्पनालाई उर्जा दिएको छ। झूटा धर्म, युद्ध, अनिकाल, घातक रोग वा भूकम्प: «किनकि धेरै मेरो नाममा आउनेछन् र भन्नेछन्: म ख्रीष्ट हुँ, र उनीहरु धेरैलाई धोका दिनेछन्। तपाइँ युद्ध र युद्ध रोएको सुन्नुहुनेछ; हेर्नुहोस् र नडराउनुहोस्। किनभने यो गर्नु पर्छ। तर यो अझै अन्त्य छैन। किनकि एउटा मानिस अर्कोको विरूद्धमा उठ्नेछ, र एउटा राज्य अर्कोको विरुद्धमा उठ्नेछ। र यहाँ र त्यहाँ भोक र भूकम्प हुनेछ »(मत्ती २४: ५-)।
कोहि भन्छन कि जब हामी युद्ध, भोक, रोग र भूकम्प बढेको देख्छौं, अन्त नजिकै छ। ख्रीष्टको आगमन भन्दा पहिले चीजहरु साँच्चै नराम्रो हुनेछ भन्ने विचार बाट प्रेरित, कट्टरपन्थीहरु, सत्य को लागी आफ्नो जोश मा, प्रकाश को पुस्तक मा अन्त समय कथन प्रमाणित गर्न कोसिस गरेका छन्।
तर येशूले के भन्नुभयो? बरु, उहाँ विगत २००० बर्ष को इतिहास मा मानवता को निरन्तर स्थिति को बारे मा कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ भएको छ र सँधै धेरै स्क्यामर हुनेछ जब सम्म उनी फिर्ता आउँदैनन्। त्यहाँ युद्ध, अनिकाल, प्राकृतिक प्रकोप र बिभिन्न ठाउँहरुमा भूकम्प भएको छ। के त्यहाँ येशू को समय देखि एक पुस्ता हो कि यी घटनाहरु लाई छोडिएको छ? येशूको यी भविष्यसूचक शब्दहरु इतिहास को हरेक युग मा आफ्नो पूर्ति पाउन।
तैपनि मानिसहरु अतीत मा गरे जस्तै विश्व घटनाहरु लाई हेर्छन्। केहि दाबी गर्छन् कि भविष्यवाणीहरु खुलाइरहेका छन् र अन्त नजिकै छ। येशूले भन्नुभयो: “तिमीले युद्ध र युद्धको आवाज सुन्नेछौ; हेर्नुहोस् र नडराउनुहोस्। किनभने यो गर्नु पर्छ। तर अन्त्य अझै भएको छैन Matthew (मत्ती २४:))।
कुनै डर छैन
दुर्भाग्यवश, एक सनसनीखेज अन्त-समय परिदृश्य टेलिभिजन, रेडियो, इन्टरनेट, र पत्रिकाहरुमा प्रचार गरीरहेको छ। यो प्रायः सुसमाचार प्रचार मा प्रयोग गरीन्छ कि मानिसहरु लाई येशू ख्रीष्ट मा विश्वास गर्न को लागी। येशू आफैंले मुख्यतया प्रेम, दया, दया, र धैर्य को माध्यम बाट सुसमाचार ल्याउनुभयो। सुसमाचारमा उदाहरणहरु हेर्नुहोस् र आफैंलाई हेर्नुहोस्।
पावल यसो भन्छन्: “वा उहाँको दया, धैर्य र सहनशीलताको धनलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ? के तपाइँलाई थाहा छैन कि भगवानको भलाइ तपाइँ पश्चाताप को लागी नेतृत्व गर्नुहुन्छ? " (रोमी २: ४)। यो भगवान को भलाई हो कि हामी को माध्यम बाट अरु को लागी व्यक्त गरीएको छ, डर को लागी कि मानिसहरु लाई येशू सम्म ल्याउँदैन।
येशूले यो सुनिश्चित गर्न को लागी संकेत गर्नुभयो कि हामी आध्यात्मिक रूप बाट उसको फिर्ता को लागी तयार छौं जब पनी यो हुनेछ। येशूले भन्नुभयो: “तर तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ कि यदि घरको मालिकलाई थाहा हुन्छ कि चोर कुन बेला आउँदैछ, उसले उसको घर भत्काउन दिँदैन। के तपाइँ पनि तयार हुनुहुन्छ! किनकि मानिसको पुत्र एक घण्टामा आउँछ जब तपाइँ सोच्नुहुन्न "(लूका 12,39: 40)।
त्यो उनको फोकस थियो। यो मानव ज्ञान भन्दा बाहिर केहि संकेत गर्न को लागी भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। "तर त्यो दिन वा घडी को बारेमा कसैलाई थाहा छैन, स्वर्गमा स्वर्गदूतहरु, पुत्र पनि हैन, तर केवल पिता" (मत्ती २४:३24,36)।
केहि मानिसहरु स्वर्गदूतहरु को तुलना मा राम्रो संग येशू को आगमन को लागी तयारी को लागी भन्दा राम्रो संग सूचित हुन चाहने मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यदि हामी येशुलाई हामी मार्फत र हामी मा बाँच्न को लागी अनुमति दिन्छौं भने हामी तयार छौं, जसरी उहाँको बुबा उहाँ को माध्यम बाट र उहाँ मा रहनुहुन्छ: that त्यस दिनमा तपाइँ जान्नुहुनेछ कि म मेरो बुबामा छु र तपाइँ म र म तिमीमा »( यूहन्ना 14,20)।
आफ्ना चेलाहरुका लागी यो बिन्दुलाई सुदृढ पार्न येशूले विभिन्न दृष्टान्त र समानताहरु प्रयोग गर्नुभयो। उदाहरण को लागी: "जसरी यो नूह को दिन मा थियो, त्यसैले यो मानिस को पुत्र को आगमन मा हुनेछ" (मत्ती २४:३24,37)। नूहको समयमा त्यहाँ एक आसन्न विनाश को कुनै संकेत थिएन। युद्ध, अनिकाल र रोगहरु को कुनै अफवाह छैन। क्षितिज मा कुनै धम्की बादल, बस अचानक भारी वर्षा। अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण समृद्धि र नैतिक विकृति हातमा गएका थिए। "उनीहरूले यसलाई बेवास्ता गरे जब सम्म बाढी आएन र उनीहरु सबैलाई बगाए, र यसैले यो मानिसको पुत्र को आगमन मा हुनेछ" (मत्ती २४:३))।
नूहको उदाहरणबाट हामीले के सिक्नुपर्छ? मौसम ढाँचामा हेर्दै र कुनै संकेतहरु को लागी देखीरहनु भएको छ कि हामीलाई एक मिति को बारे मा सूचित गर्न सक्छ कि स्वर्गदूतहरु लाई थाहा छैन? होईन, यो बरु हामीलाई सावधान र चिन्तित हुन को लागी सम्झाउँछ कि हामी जीवन मा हाम्रो डर बाट तौलिएको छैन: "तर होशियार रहनुहोस् कि तपाइँको मुटु नशा र पिउने र दैनिक चिन्ता संग तौल छैन र यो दिन अचानक अन्त्य हुँदैन। एक पासो जस्तै तिमीहरुकहाँ आउँछ Lu (लूका २१:३४)।
पवित्र आत्माले तपाईंलाई मार्गदर्शन गरोस्। उदार हुनुहोस्, अपरिचितहरुलाई स्वागत गर्नुहोस्, बिरामीलाई भेट्नुहोस्, येशूलाई तपाइँ मार्फत काम गर्न दिनुहोस् ताकि तपाइँका छिमेकीहरूले उसको प्रेमलाई चिन्न सकोस्! “तब विश्वासी र बुद्धिमान सेवक को हो जसलाई प्रभुले आफ्ना सेवकहरुलाई सही समयमा खाना दिनको लागी नियुक्त गर्नुभएको छ? धन्य हो त्यो नोकर जसलाई उसको मालिकले देख्दा देख्छ "(मत्ती २५: ४५-४25,45)।
हामी जान्दछौं कि ख्रीष्ट हामीमा बस्नुहुन्छ (गलाती २:२०), कि उहाँको राज्य हामी र उहाँको चर्चमा शुरू भएको छ, कि जहाँ हामी बस्छौं त्यहाँ अब सुसमाचारको प्रचार गरिनेछ। «किनकि हामी आशामा मुक्ति पाएका छौं। तर देखिएको आशा आशा छैन; किनकि तपाइँ के देख्न को लागी कसरी आशा गर्न सक्नुहुन्छ? तर यदि हामीले नदेखेको कुराको आशा गर्छौं, हामी धैर्यताका साथ यसको पर्खाइमा छौं "(रोमी:: २४-२५)। हामी धैर्यपूर्वक हाम्रो प्रभु को फिर्ता को आशा मा पर्खनुहोस्।
"तर यो मामला होइन कि प्रभु आफ्नो प्रतिज्ञा गरिएको फिर्तामा ढिलाइ गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै केहि विश्वास गर्छन्। होइन, उहाँ पर्खिरहनुभएको छ किनकि उहाँ हामीसँग धैर्य हुनुहुन्छ। किनकि उहाँ चाहनुहुन्न कि एक जना मानिसको पनि मृत्यु होस्, तर त्यो सबै पश्चाताप (पश्चाताप, आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन) र उहाँतिर फर्कनुहोस् "(२ पत्रुस ३:))।
प्रेरित पत्रुसले हामीलाई यस बीचमा व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ: "तसर्थ, प्रियजनहरु, जब तपाइँ पर्खनु हुन्छ, प्रयास गर्नुहोस् कि तपाइँ उहाँको सामुन्ने पवित्र र निर्दोष पाउन सक्नुहुन्छ" (२ पत्रुस ३:१४)।
येशू फेरि कहिले आउनुहुन्छ? उहाँ पहिले नै पवित्र आत्मा को माध्यम बाट तपाइँ मा बस्नुहुन्छ यदि तपाइँ येशू लाई तपाइँको मुक्तिदाता र मुक्तिदाता को रूप मा स्वीकार गर्नुभयो। जब उहाँ शक्ति र महिमा संग यस संसार मा फर्किनुहुनेछ, स्वर्गदूतहरुलाई पनि थाहा छैन, र न त हामी। बरु, हामी कसरी हामी परमेश्वरको प्रेम बनाउन सक्छौं, जो येशू ख्रीष्ट को माध्यम बाट हामी मा रहन्छौं, हाम्रा साथीहरु लाई देख्न को लागी ध्यान दिऔं र येशू फेरि नआउन्जेल धैर्यपूर्वक पर्खनुहोस्!